Dagaal ku dhexmaray Sanca argagixisada xuutiyiinta iyo ciidamo daacad u ah kaligii-taliyihii hore - Horn Future
Dagaal ku dhexmaray Sanca argagixisada xuutiyiinta iyo ciidamo daacad u ah kaligii-taliyihii hore
Sanca (Horn Future)-Waxa caasimada Yemen ee Sanca xalay ka dhacay iska hor’imaad weyn oo dhexmaray maleeshiyada argagixisada shiicada xuutiyiinta iyo ciidamo daacad u ah kaligii-taliyihii hore ee talada laga siibay Cali Cabdallah Saalax kaas oo sababay dhimasho sida ay sheegtay warbaahinta caalamka iyo tan guduhu.
Dagaalkan hubaysan ee labada dhinac dhexmaray ayaa waxa lagu dilay sarkaal aad ugu dhow kaligii-taliyihii hore iyo 2 katirsan shiicada argagixisada xuutiyiinta kaas oo ka dhacay koonfurta caasimada habeenkii sabtida.
Wararkan ayaa waxay intaa ku dareen in Colonel Khaled Saalix al- Ridhaa oo aad ugu dhowaa kaligii-taliyihii hore ahaana ku-xigeenka madaxa waaxda xidhiidhka dibadda ee xisbigiisa lagu dilay dagaalkan kaas oo socday in ka badan saacad.
Waxa sido kale ilahan ay sheegeen in isgoys baadhitaan oo ay leeyihiin argagixisada xuutiyiintu lagu joojiyay baabuur uu watay mid kamid ah wiilasha uu dhalay kaligii-taliyihii hore kadibna dagaalkani uu ka bilowday goobtan,halka shiicada xuutiyiintu ay sheegtay in rag hubaysan ay soo weerareen isgoys ammaan ah,halkaas oo lagu dilay laba katirsan iyaka.
Wakaalada wararka ee Anadolu oo soo xigtay dad goob-joogayaal ah ayaa sheegtay in argagixisada xuutiyiintu ay ka sameeysteen tobonaan goobood oo ammaan ah dhinaca waqooyi ee Sanca, kadib markii isku dhacyo ay ka dhaceen xaafadda “Xadda”,iyaga oo kusso xoojiyay maleeshiyo tiro badan goobtan.
Waxa dhanka kale wararkan ay sheegeen in kaligii-taliyihii hore uu kusoo daad-gureeyay ciidamada daacada u ah ee lagu magacaabo ilaalada jamhuuriga agagaaerka xafiiska xisbigiisa,aqalada isaga iyo wiilashiisu ay leeyihiin iyo fagaaraha toddobaatanka.
Dadka deegaanka xaafada Xadda ayaa sheegay in iska hor’imaadadani ay dib u bilowdeen kuwaas oo joogsaday muddo 2 saacadood kadib saqdii dhexe,halkaas oo laga maqlayay dhawaqa hubka fudud iyo kan dhexdhexaadka waabarigii salaadii Subax sida warkani sheegay.
Waxa xusid mudan in argagixisada shiicada xuutiyiinta tirada yar oo taageero ka hela Iran dalkana dagaal ku salaysan madhab diimeed ay isku baahaysteen kaligii-taliyahan shirqoolkii ay ku afgambiyeen xukuumadda dhalatay kadib kacdoonka bulshada Yemen.
Iran oo taageero maaliyeed mid ciidan u fidisa argagixisada shiicada xuutiyiinta oo ah tiro ahaan 4% bulshada Yemen ayaa ujeedada ay tahay in Yemen ay ka abuurto urur lamid ah kan shiicada xisbula ee Lebenaan ee xasuuqa ku haya bulshada Syria ee u badan Sunniyiinta,balse qorshahan Iran uu u muuqday mid guul-daraystay.
« Taliska Myanmar oo xasuuqay in ka badan 90 Muslimiin ah iyo barakaca kumanaan+daawo	» RDC: Le nombre de déplacés internes a doublé en six mois